आइतबार मे 9, 2021 |
आइतबार मे 9, 2021
विषय — आदम र फेल म्यान
वर्ण पाठ: स्वर्ण पाठ: याकूब 1 : 18
“"सत्यको वचनबाट परमेश्वरले हामीलाई उहाँको बालक बनाउने निर्णय लिनु भयो। उहाँले सृजना गरेको वस्तुहरू मध्ये हामीलाई सब भन्दा महत्वपूर्ण बनाउनु इच्छा गर्नुभयो।"”
उत्तरदायी पढाइ: यशैया 65 : 18, 19, 21-24
21 त्यस शहरमा, यदि कसैले घर बनाउँछ भने, त्यो मानिस त्यहीं बस्नेछ। यदि कसैले दाखहरूका बोट बगैंचामा रोप्दछ भने त्यस मानिसले त्यही बगैंचाबाट दाख फलहरू खानेछ।
22 कहिल्यै पनि एकजनाले घर बनाउने छैन अनि अर्को मानिस त्यसमा बस्ने छैन्। कहिल्यै पनि एकजनाले बगैंचा लगाउने छैन अनि अर्को मानिसले बगैंचाको फलफूल खाने छैन्। मेरा मानिसहरू रूखहरू बाचुञ्जेल सम्म बाँच्नेछन्। मैले रोजेका मानिसहरू आफूले बनाएका चीजहरू प्रसन्न भएर लिनेछन्।
1. भजनसंग्रह 8 : 1, 3-6
3 हे परमप्रभु, तपाईंले आफ्नो हातले बनाउनु भएको स्वर्ग अनि तपाईंले सृष्टि गर्नु भएका जुन र ताराहरू हेरेर म अचम्म मान्छु।
2. उत्पत्ति 1: 26, 28 (तिर :), 31 (तिर 1st.)
28 परमेश्वरले तिनीहरुलाई आशीर्वाद दिंदै भन्नुभयो, धेरै सन्तानहरु उत्पति गराऊ र पृथवी भरेर तिनीहरुको हेरचाह गर। समुद्रका माछाहरु, आकाशमा उड्ने चराहरु अनि पृथ्वीमा हिँडडुल गर्ने, सबै प्राणीहरुमाथि शासन गर।
3. उत्पत्ति2: 6-9, 16, 17
6 पृथ्वीबाट पानी निस्कियो अनि मैदानमा फैलियो।
7 तब त्यसपछि परमप्रभु परमेश्वरले भूँईबाट माटो उठाउनु भयो अनि मानिस सृष्टि गर्नु भयो। परमप्रभुले मानिसको नाकबाट सास हालिदिनु भयो र यसलाई जिउँदो बनाउनु भयो।
8 परमप्रभु परमेश्वरले अदन नाउँ भएको ठाउँमा पूर्वपट्टि एउटा बगैंचा बनाउनु भयो र उहाँले सृष्टि गर्नु भएको मानिसलाई त्यहाँ राख्नु भयो।
9 परमेश्वरले भूमिबाट राम्रा-राम्रा रुखहरु अनि खान योग्य फलहरु लाग्ने रुखहरु उमार्नु भयो। उहाँले बगैंचाको बीचमा जीवनको रुख अनि असल र खराबको ज्ञान दिन योग्य रुख पनि रोप्नु भयो।
16 परमप्रभु परमेश्वरले त्यस मानिसलाई आज्ञा दिनु भयो। परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, तिमीले कुनै चिन्ता बिना यस बगैंचाको कुनै पनि रुखबाट फलहरु खान सक्छौ।
17 तर तिमीले त्यस रुखको कुनै फल खानु हुँदैन जसले असल र खराबको ज्ञान दिन्छ, किनभने जुन दिन तिमी त्यस रुखको फल खान्छौ निश्चयनै त्यस दिन तिमी आफै मर्नेछौ।
4. उत्पत्ति3: 1-7, 9-13, 23, 24
1 परमप्रभु परमेश्वरले सृष्टि गर्नु भएको सबै जन्तुहरु मध्ये सर्प अत्यन्त धूर्त थियो। सर्पले उसलाई सोध्यो, ए नारी! के परमेश्वरले बगैंचामा कुनै पनि रुखबाट फल खानु हुँदैन भनी मनाही गर्नु भएको छ?
3 तर परमेश्वरले भन्नुभयो, ‘तिमीहरुले बर्गैचाको बीचमा भएको रुखको फल खानु हुँदैन, तिमीहरुले छुनु पनि हुँदैन, नत्र तिमीहरु मर्नेछौ।
5 परमेश्वरले पनि जान्नु हुन्छ जब तिमीहरुले त्यस रुखको फल खान्छौ तिमीहरुको ज्ञान खोलिन्छ अनि तिमीहरु कुन असल कुन खराब जान्ने ज्ञानी भई परमेश्वर जस्तै हुनेछौ।
9 परमप्रभु परमेश्वरले त्यस पुरुष मानिसलाई बोलाउनु भयो अनि सोध्नु भयो, तिमी कहाँ छौ?
10 तब त्यस पुरुष मानिसले उत्तर दियो, तपाईको आवाज मैले बगैंचा भित्र चाल पाएँ र म नाङ्गैं रहेको हुँदा डराएँ र म लुकें।
11 तब परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, तिमी नाङ्गैं छौ भनी कसले भन्यो? के तिमीले मैले जुन रुखबाट फल नखानु भनी आज्ञा दिएको थिएँ त्यसैको फल त खाएनौ?
12 त्यस मानिसले भने, स्त्री जो तपाईंले मसित बस्न दिनु भयो, उसैले मलाई रुखको फल दिईन् अनि मैले खाएँ।
13 तब परमप्रभु परमेश्वरले त्यस स्त्री मानिसलाई भन्नुभयो, तिमीले किन यस्तो काम गर्यौ?” तब त्यस स्त्रीले भनी, “सर्पले मलाई धोका दियो र मैले त्यो फल खाएँ।
5. हितोपदेश 30 : 5, 6
6. स्तोत्रसंहिता 51 : 1, 2, 10-12
11 मलाई नठेल्नु होस्। अनि मदेखि तपाईंको पवित्र आत्मा टाढा नलैजानु होस्!
12 तपाईंको सहयोगले मलाई खुशी पार्दछ! मलाई फेरि एकपल्ट त्यो आनन्द दिनुहोस्। मेरो आत्मा बलियो पारी दिनुहोस् र तपाईंको आज्ञा पालन गर्न तयार होस्।
7. एफिसी4: 17, 18, 23, 24
8.2कोरिन्थी5: 1, 6-8
1 हामी जान्दछौं, यस धरतीमा हामी जुन तम्बूमा बस्छौं त्यो नष्ट हुनेछ। तर जब त्यो नष्ट हुनेछ, हामीले बस्ने घर परमेश्वरबाट पाउनछौं। त्यो घर मानिसले बनाएको होइन। यो घर स्वर्गमा हुन्छ र अनन्त रहनेछ।
9. 1 कोरिन्थी 15 : 22
सबै थोक, परमेश्वर आफ्नै स्वरूपमा बनाउनुहुन्छ। जीवन अस्तित्वमा प्रतिबिम्बित हुन्छ, सत्यतामा सत्य, ईश्वर भलाइमा, जसले उनीहरूको आफ्नो शान्ति र स्थायित्व प्रदान गर्दछ। प्रेम, निःस्वार्थ भावबाट निस्केको, सबैलाई सुन्दरता र प्रकाशले नुहाईन्छ।… मानिस, उहाँको समानतामा बनेको छ, र सारा पृथ्वीमा परमेश्वरको प्रभुत्व प्रतिबिम्बित गर्दछ। भगवान र पुरुषसँगको सहमानिस र अनन्तको रूपमा मानिस र महिलाले सदासर्वदा प्रतिबिम्बित गर्दछ, महिमाको गुणमा, असीम पिता-आमा भगवान।
2. 517: 31-4 (तिर 1st.)
माटो सम्म मानिस बनेको छैन। उसको जन्मसिद्ध अधिकार प्रभुत्व हो, अधीनताको होइन। उहाँ पृथ्वी र स्वर्गमा विश्वासको स्वामी हुनुहुन्छ - उहाँ आफैंले आफ्नो निर्माताको अधीनमा बस्नुहुन्छ।
जीवन, सधैं भएको छ, र सँधै पदार्थको स्वतन्त्र हुनेछ; किनकि जीवन भनेको परमेश्वर हो र मानिस परमेश्वरको विचार हो, भौतिक होइन तर आध्यात्मिक तवरले बनेको छ, र क्षय र धूलोको अधीनमा छैन।
देवता आफ्नो कामबाट सन्तुष्ट थिए। उहाँ कसरी हुन सक्नुहुन्थ्यो, किनकि आत्मिक सृष्टि उहाँको असीम आत्म-संयम र अमर बुद्धिको विस्तार हो, उत्पत्ति थियो?
मानवको ठूलो गल्ती मान्नु नै यो हो कि मानिस, ईश्वरको छवि र समानता, पदार्थ र आत्मा दुबै असल र खराब दुबै हो।
उत्पत्ति 2: 6. पृथ्वीबाट पानी निस्कियो अनि मैदानमा फैलियो।
उत्पत्तिको दोस्रो अध्यायले परमेश्वर र ब्रह्माण्डप्रति यस भौतिक दृष्टिकोणको कथन राख्दछ जुन बयान गरिएको छ जुन वैज्ञानिक सत्यको बिल्कुल विपरीत छ।
पहिलो रेकर्डले सबै सामर्थ्य र सरकारलाई परमेश्वरमा प्रदान गर्दछ, र मानिसलाई परमेश्वरको सिद्धता र शक्तिबाट हटाउँछ। दोस्रो रेकर्डले मानिस परिवर्तन र नश्वरको रूपमा ईतिहासको रूपमा रहेको छ - देवताबाट अलग भएको र आफ्नै कक्षामा घुमिरहेको जस्तो। अस्तित्व, दिव्यताबाट अलग, विज्ञान असम्भवको रूपमा वर्णन गर्दछ।
यो दोस्रो रेकर्ड निस्सन्देह यसको बाह्य रूप मा त्रुटि को इतिहास दिन्छ, पदार्थ र जीवन मा बुद्धिमत्ता भनिन्छ। यसले ईश्वरीय आत्माको सर्वोच्चताको विपरित पन्थिज्म रेकर्ड गर्दछ; तर चीजहरूको यो अवस्था अस्थायी र यो मानिस मर्छ भनेर घोषणा गरिएको छ, धूलो माटोमा फर्किने।
आदम नामले जीवनमा अनन्त छैन, तर शुरुवात र अन्त छ भनेर गलत धारणा प्रस्तुत गर्दछ; असीमितले सीमित प्रवेश गर्छ, कि बुद्धिमत्ता गैर-बुद्धिमत्तामा जान्छ, र आत्मा भौतिक अर्थमा बास गर्छ; त्यो अमर दिमागले पदार्थको परिणाम दिन्छ, र पदार्थ मर्श्वर दिमागमा; कि उहाँ एक सृष्टिकर्ता र सृष्टिकर्ताले उहाँ सृजनुभएको कुरामा प्रवेश गर्नुभयो, र त्यसपछि पदार्थको नास्तिकतामा गायब हुनुभयो।
दुष्टले अझै पनि आफूलाई दिमागको रूपमा पुष्टि दिन्छ, र घोषणा गर्दछ कि त्यहाँ एक भन्दा बढि बुद्धि वा ईश्वर छ। यसले भन्छ: "त्यहाँ प्रभु र देवताहरू धेरै हुनेछन्। म घोषणा गर्दछु कि भगवानले दुष्ट दिमाग र दुष्टात्मालाई बनाउनुहुन्छ, र म त्यसलाई सहायता गर्छु। सत्य पक्षमा बदल्छ र आत्माभन्दा फरक हुन्छ। परमेश्वर, आत्मा, जो एक मात्र जीवन हुनुहुन्छ भन्दा बढी जीवन हुन्छ जस्तो देखिन्छ।"
यो त्रुटि त्रुटि हो प्रमाणित छ। यसको जीवन जीवन होइन, तर केवल एक क्षणिक, एक अस्तित्वको गलत अर्थ हो जुन मृत्युमा समाप्त हुन्छ।
मानिस एक भौतिक आधारबाट सृष्टि गरिएको थिएन, न आत्माले कहिल्यै बनाएको भौतिक नियमहरू पालन गर्न आमन्त्रित गरियो; उसको प्रान्त आध्यात्मिक नियमहरूमा रहेको छ, मनको उच्च कानूनमा।
गल्तीको डरलाग्दो दिन, कालोपना र अराजकता माथि पनि, सत्यको आवाजले अझै भन्यो: "आदम, तिमी कहाँ छौ? चेतना, तिमी कहाँ छौ? के तपाई मनमा विश्वास गर्नुहुन्छ कि दिमागमा पदार्थ छ, र त्यो दुष्ट मन हो, वा कला हो? के तपाईं जीवित विश्वासमा हुनुहुन्छ कि त्यहाँ एक मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँको आज्ञा पालन गर्दै हुनुहुन्छ? "जब सम्म यो पाठ सिकिदैन कि भगवान केवल एक मात्र दिमागमा शासन गर्ने मानिस हुनुहुन्छ, नश्वर विश्वास शुरुमा जस्तै डराउनेछ, र "तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ?" भन्ने मागबाट लुक्नेछ। यो भयकर माग, "आदम, तपाई कहाँ हुनुहुन्छ?" टाउको, मुटु, पेट, रगत, स्नायुहरू, इत्यादिबाट प्राप्त भयो। "हेर, म यहाँ छु, शरीरमा सुख र जीवनको खोजी गर्दैछु, तर केवल भ्रम, झूटा दाबीहरूको मिश्रण, झूटा खुशी, पीडा, पाप, बिमारी, र मृत्यु।"
मानिसको पतन वा भगवानको विपरित वा परमेश्वरको अनुपस्थितिलाई जे स .्केत गर्दछ त्यसले आदम सपना हो जुन न त मन हो न मानिस, किनकि त्यो पिताबाट जन्मेको छैन।
सत्यमा सबै त्रुटिहरूको एक मात्र जवाफ छ - पाप, बिरामी र मृत्युलाई: "धूलो [व्यर्थता] तपाई हुनुहुन्छ, र धूलो [केही पनि] तपाई फर्कनु हुँदैन।"
"जसरी आदममा [त्रुटि] सबै मर्दछन्, त्यसरी नै ख्रीष्टमा [सत्य] सबै जीवित हुनेछन्।" मानिसको मृत्यु एक मिथक हो, किनकि मानिस अमर छ। आत्मा अब पदार्थमा डुबेको छ भन्ने गलत गलत विश्वास, कुनै समय भविष्यबाट यसबाट मुक्त हुने, - यो विश्वास एक्लै नश्वर हो। आत्मा, भगवान, कहिल्यै अंकुरण हुँदैन, तर "हिजो, र आज, र सदाका लागि हो।"
मोर्टलहरूले ईश्वरको चरित्र बनाउनुपर्दछ, उनीहरूको स्नेह र लक्ष्यहरू आध्यात्मिक बृद्धि हुन्छन् - तिनीहरूले अस्तित्वको विस्तृत व्याख्याको नजिक जानुपर्दछ र असीमको केही उचित ज्ञान हासिल गर्नै पर्छ - ताकि पाप र मृत्युलाई हटाउन सकियोस्।
यो वैज्ञानिक भावना, आत्माको लागि त्याग्ने पदार्थ, कुनै पनि हिसाबले मानिसमा ईश्वरको अवशोषण र आफ्नो चिनारी गुम्न सुझाव दिँदैन, तर मानिस विस्तार व्यक्तित्व, विचार र कार्यको एक व्यापक क्षेत्र, एक अधिक विस्तृत प्रेम, एक उच्च र अधिक प्रदान गर्दछ स्थायी शान्ति।
परमेश्वर र मानिसका सम्बन्धहरू, ईश्वरीय सिद्धान्त र विचार, विज्ञानमा अविनाशी हुन्छन्; र विज्ञानलाई कुनै पतन हुन सक्तैन र मेलमिलापमा फर्कदैन, तर ईश्वरीय व्यवस्था वा आध्यात्मिक कानून राख्छ, जसमा परमेश्वर र उहाँ सृष्टि गर्नुभएका सबै सिद्ध र अनन्त छन्, यसको अनन्त इतिहासमा अपरिवर्तित रहन।
15. 171 : 4-8 (तिर 4th ,)
भौतिकवादको आध्यात्मिक विरोधाभासको माध्यमबाट, ईसाई, सत्यको माध्यमबाट पनि मानिस ईश्वरीय विज्ञानको साँचोको साथ फेरि खुल्नेछ जुन मानव विश्वासले बन्द गरेको प्रमोदवनका ढोकाहरू, र उसले आफूलाई निष्पक्ष, ठाडो, शुद्ध र स्वतन्त्र पाउनेछ।